သိန်း(၁၀၀၀) ထီပေါက်မဲအရှုပ်တော်ပုံ ယခုလ(၈)ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေထီဆုမဲသိန်း(၁၀၀၀)ဆုမဲ ကခ – ၁၂၃၅၉၃ ကို ကျွန်မတို့ပေါက်ခဲ့ပါသည် – Burmese Online News
သိန်း(၁၀၀၀) ထီပေါက်မဲအရှုပ်တော်ပုံ ယခုလ(၈)ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေထီဆုမဲသိန်း(၁၀၀၀)ဆုမဲ ကခ – ၁၂၃၅၉၃ ကို ကျွန်မတို့ပေါက်ခဲ့ပါသည်
ယခုလ(၈)ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေထီဆုမဲသိန်း(၁၀၀၀)ဆုမဲ ❗️ကခ – ၁၂၃၅၉၃ ❗️ကိုကျွန်မတို့ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ကျွန်မတို့သည် ယခုနံပါတ်ကို (၂၉.၉.၂၀၁၉)သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ၏ကိုယ်စားလှယ် အမထံမှဝယ်ယူအားပေးခဲ့ပါသည်။ online မှတဆင့်ဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက် ထီလက်မှတ်မှာ ကျွန်မတို့၏လက်ထဲတွင်မရောက်လာသေးသော်လည်း ငွေကိုသူငယ်ချင်းထံသို့ပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။
(၃၀.၉.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူမန္တလေးလာလျှင် ယူလာခဲ့ပါရန်မှာကြားထားသောကြောင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူသည် သူ၏ကိုယ်စားလှယ်အမထံသို့ ထီလက်မှတ်သွားရောက်တောင်းယူချိန်တွင် အလုပ်ကိစ္စများအကြောင်းပြပြီး မပေးခဲ့ပါ။(၁.၁၀.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင်ထီ ပေါက်စဉ်တိုက်ချိန်တွင်ကျွန်မတို့၏ ထီလက်မှတ်မှာ❗️သိန်း(၁၀၀၀)❗️ပေါက်မဲနံပါတ်ဖြစ်နေသောကြောင့် ဝမ်းသာအားရဖြင့်ဆက်သွယ်ရာတွင် ကိုယ်စားလှယ်အမသည် ကျွန်မတို့၏ပေါက်မဲလက်မှတ်ကိုထုတ်မပေးတော့ပဲ သူအပိုင်လုပ်ယူလိုက်ပါသည်။
ကျွန်မတို့တွေ ကိုယ်စားလှယ်အမရှိရာအရပ်သို့ သွားရောက်ညှိနှိုင်းချိန်တွင် အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များနှင့် အဆင်မပြေခဲ့ပါ။ ကျွန်မတို့ထံတွင် သက်သေအထောက်ထားအစုံအလင်ရှိပါလျှက်နှင့် ဘာကြောင့်များ မတရားသဖြင့်ခံခဲ့ရပါသလဲ?(ယခုအဖြစ်ပျက်များသည် အမှန်တကယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအကြောင်းအရာများဖြစ်ပါသည်)ကျွန်မတို့ရဲ့ ကံကကောင်းတာလား?ကံကဆိုးတာလား??သူများရဲ့ကံတရားနဲ့ပေါက်ခဲ့တဲ့ငွေကြေးများစွာနှင့် ယခု မိသားစုပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်??
ကျေးဇူးပြု၍ ဒီ video file လေးကိုနားထောင်ကြည့်ပေးကြပါရှင်..??
သားလေးအပေါ်မျှော်လင့်ချက်မထားဘဲ လူသားပီသပြီး ရိုးသားဖြူစင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ရင်တော်ပါပြီဆိုတဲ့ အောင်သူ
ဗဟိုစည်ဆေးရုံမှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအများစုအပါအဝင် ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ ၁၉ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိ၊ သူနာပြု အကူတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ရကြောင်းသိရ
လွိုင်ကော်မြို့နယ် ပီကင်းကောခူကျေးရွာတွင် ဝက်အများအပြားသေဆုံး
ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံ လူနာ ၁၁ ဦးထပ်တိုး၊ စုစုပေါင်း ၅၂ ဦး ရှိလာ
ပြစ်ဒဏ် လျှော့ချပေးခြင်းခံရတဲ့ ဝင်းနဲ့ဇော်ရဲ့ တစ်သက်တစ်ကျွန်းပြစ်ဒဏ်မှ ထပ်မံလျှော့ပေါ့နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ရှိနေ